Wasaaradda amniga oo la imaaneysa qorshe cusub oo lagu sugaayo amniga Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasaaradda amniga oo la imaaneysa qorshe cusub oo lagu sugaayo amniga Muqdisho
Wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay la imaaneyso qorshe ballaaran oo lagu sugaayo amniga guud ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Wasiirka wasaaraddaas Maxamed Abuukar Islow oo maanta xilkaan la wareegay ayaa sheegay inay haatan diyaariyeen qorsheyaal cusub oo wax looga qabanaayo ammaanka guud ee dalka.
Waxa uu wasiirka sheegay in magaalada Muqdisho ay u diyaariyeen barnaamij hal ku dhig looga dhigay “Xasilinta Caasimadda”, wuxuuna barnaamijkaan sheegay in isbedal dhab ah oo amniga u keeni doono Muqdisho.
Dhanka kale, wasiir Islow ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in wada-shaqeyn ay la yeeshaan ciidamada ammaanka, si looga hortago dadka caaddeystay falalka ammaanka ka dhanka ah.
Waxa uu wasiirka baaq u diray dhallinyarada ka tirsan Xarakada Al-shabaab, wuxuuna sheegay inay haystaan fursad ay isugu soo dhiibaan dowladda federaalka, dibna uga soo laabtaan fikirka qaldan ee Al-shabaab.
Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in la abaal-marin doonno cid walbo oo kamid ah shacabka Muqdisho, walibana soo sheegtay shaqsiyaadka ka tirsan Al-shabaab.